त्यो सहमतिबाट सर्वप्रथम ता प्रचन्डले संविधानसभामा उनले प्रधानमन्त्रीको पद छाडेर त्यागको किर्तिमान कायम गरेको भनेर जुन वक्तव्य दिएका थिए, त्यो कृतिम अभिनय मात्र भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । उनले कुनै त्याग गरेर होइन, आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री हुने सौदा गरेर अर्थात्, खनालपछि उनी प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता गरेर नै उनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । त्यसरी उनले संविधानसभामा त्यागको किर्तिमानको जुन लामो वक्तव्य दिएका थिए, त्यो असत्य भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यसले उनको अत्यन्त निम्नस्तरको नैतिक स्तरलाई पनि बताउँछ । तैपनि जुनसुकै कारणले भएपनि उनले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीको चुनावमा निकास दिएको कार्यलाई सकारात्मक भनेका छौं र अहिले पनि हाम्रो त्यो मत कायम छ ।
त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको �माओवादी लडाकूहरुको छुट्टै वा अन्य सुरक्षा निकायमा संलग्नतामा छुट्टै फोर्स निर्माण गर्ने सहमित� सबैभन्दा गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा हो । त्यो माओवादीहरुले लामो समयदेखि जोड दिंदै आएको एजेन्डा हो । त्यो एजेन्डालाई स्वीकार गरेर खनालले अत्यन्त गैर�जिम्मेवार कार्य गरेका छन् । हाम्रो पार्टीले प्रारम्भ देखि नै माओवादी लडाकूहरुलाई समूहगत रुपमा नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कार्यको अत्यन्त घातक ठहराएर विरोध गर्दै आएको छ । उनीहरुका लडाकूहरुलाई बेग्लै छुट्टै बलका रुपमा खडा गर्ने कार्यबाट शान्ति प्रक्रियामा कुनै मद्दत नपुग्ने मात्र होइन, देशमा माओवादीहरुको अधिनायकवादी शासन कायम हुने सम्भावना समेत रहने छ । यो पनि कम गम्भीर कुरा होइन कि प्रधानमन्त्रीका लागि माओवादीहरुको समर्थन पाउन खनालले उनीहरुको (माओवादीहरुको) त्यो शर्तलाई स्वीकार गरेका छन् । त्यसले उनको अत्यन्त अविस्वसनीय र अवसरवादी चरित्रको पनि प्रदर्शन गरेको छ ।
आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिलाई पनि हामीले गलत ठहराउँछौं । हामीले प्रारम्भ देखि नै यो मत प्रकट गर्दै आएका छौं कि प्रधानमन्त्रीको चुनाव सहमति वा त्यो हुन नसकेमा बहुमतीय प्रणालीद्वारा नै हुनुपर्दछ । त्यसपछि सत्ता वा प्रतिपक्षमा भएका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले आपसमा सहमती र सहयोग गरेर संविधानको निर्माणको कार्यलाई सफल पार्नुपर्ने आवस्यकतामा हामीले जोड दिंदै आएका छौं । त्यसको विपरीत चक्रिय प्रणालीको हामीले लगातार विरोध गर्दै आएका छौं । त्यस प्रकारको प्रणालीले देशका अगाडिका जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नेभन्दा पनि बेग्ला बेग्लै संगठनहरुको सत्ताको भोकलाई पूरा गर्ने प्रवृत्तिको नै संकेत दिन्छ । त्यही दृष्टिकोण अनुसार अहिलेको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेखित चक्रिय प्रणाली वा आलोपालोको समझदारीलाई पनि हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र त्यसको आलोचना गर्दछ । त्यो बाहेक त्यो सम्झौताको कमजोरी यो कुरामा छ कि त्यसले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमती कायम गर्नेभन्दा खालि दुई राजनीतिक शक्तिहरुद्वारा नै आलोपालो गरेर सत्ता कब्जा गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । त्यो बाहेक त्यस प्रकारको तरिकालाई षडयन्त्रकारी प्रकारले सफल पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक तरिकाले सहमति वा बहुमतीय प्रणालीद्वारा सरकारमा पुग्ने प्रयत्न गर्नुभन्दा पनि त्यसरी सत्ता कब्जा गर्ने तरिकालाई प्रजातान्त्रिक तरिका भन्न सकिन्न । त्यसको नै परिणाम हो कि अहिले प्रारम्भमा नै त्यसबारे विवाद पैदा भएको छ । त्यो विवादले मन्त्रीमन्डलको गठन र सरकारको काममा समेत कुन प्रकारको असर पर्ने हो ? त्यो गम्भीर सोचनीय प्रश्न बनेको छ ।
त्यो कुरा सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ कि माओवादीको कारणले खनालको सरकारमा सबैभन्दा समस्या पैदा गर्नेछ । माओवादीहरुको कार्यप्रणाली र गतकालको उनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमी माथि विचार गर्दा खनाल सरकारमा सामेल भएपनि उनीहरुले (माओवादीहरुले) बेग्लाबेग्लै शान्ति र संविधानको प्रक्रिया तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पु�याउने तथा देशमा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्न नै बढी प्रयत्न गर्ने बढी सम्भावना देखिन्छ । अहिले उनीहरुको सहमतिमा उल्लेखित माओवादी लडाकूहरुको बेग्लै बल खडा गर्ने वुँदा तथा त्यसलाई खनालले समर्थन गरेको कुराबाट उनले माओवादीहरुको नीतिलाई अनुशरण गर्ने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । माओवादीहरुको त्यस प्रकारको नीति र खनालको उनीहरु प्रतिको सम्झौतापरस्त नीतिका कारणले शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरु कहाँसम्म सफल हुनेछन् ? गम्भीर र विचारणीय प्रश्न बन्न गएको छ । उक्त कार्यहरु सफल हुन नसकेमा देशमा प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्ने वा देश असफल राष्ट्रमा परिणत हुने खतरा हुनेछ । माओवादीहरुको सम्पूर्ण कार्यप्रणाली र गतिविधिमा ध्यान दिंदा उनीहरुले देश र खनाल सरकारलाई पनि त्यही दिशामा लैजान उपयोग गर्ने तथा त्यस प्रकारका नीतिहरुप्रति स्पष्ट र सही दृष्टिकोण अपनाउन नसकेमा नयाँ सरकारको गठन भएपनि शान्ति, संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा त्यसले सकारात्मक भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावना रहने छैन । त्यस प्रकारको अवस्थामा ने.क.पा. (मसाल)ले शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरु र जनतासित उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने र जनदवावको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छ ।
मिति ः २०६७ माघ २४ गते